Android ပေါ်၌အသစ်တစ်ခုကိုပြန်လည် install လုပ်ခြင်း Androidsis
antocara | | အန်းဒရွိုက် Recovery ကို, NOTICIAS, လဲ tutorial
ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ် ဦး အဘို့ကြားဖူးတယ် တစ် ဦး rom ပြောင်းလဲပစ် အပြင် ရှိ root access ကို ကဝင်ရန်လိုအပ်သည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး mode ကို သို့မဟုတ် ALT + s ကိုနှိပ်ပါ သုတ်ပါ သို့မဟုတ်အလားတူအရာများ, ကောင်းစွာကျနော်တို့အရာတစ်ခုချင်းစီကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ် အသစ်တစ်ခုကို revery install လုပ်ပါ.
မသန်စွမ်း root access ရယူပါ နှင့်၏နောက်ပိုင်းတွင်အပြောင်းအလဲများကိုသည် ရွမ် ကျနော်တို့ကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ် နာလန်ထူ။ အ နာလန်ထူ ၎င်းသည် HOME + POWER ခလုတ်များကိုဖုန်းပိတ်ပြီးတစ်ပြိုင်တည်း နှိပ်၍ ဖုန်းအားသွင်းခြင်းမပြုမီကာလပတ်လုံးအလုပ်လုပ်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရွမ်, ဒါကြောင့်ငါတို့ကပြောင်းလဲနိုင်သည်, backup တစ်ခုလုပ်သို့မဟုတ် Sd ကဒ်၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုပြုပြင်နိုင်သည်။ စက်ရုံမှဖုန်းလာသောအခါဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်ကွန်ပျူတာနှင့် system console နှင့် SDK တို့မှလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဖုန်းကိုအသုံးပြုခွင့်ရခြင်းဖြစ်သည်။ အသစ်ကအတူ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး console ပေါ်ရှိ linux command များမှတဆင့်ဖုန်းမှကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်နိုင်ချေကိုတိုးချဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တပ်ဆင်ထားသည့်ပြန်လည်ဆယ်တင်မှုပေါ် မူတည်၍၊ SD ကဒ်ကို format လုပ်ပါ၊ ကဒ်၏အခန်းကဏ္ repair များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်းထားသောအရံသိမ်းဆည်းမှုတစ်ခုပြန်ယူခြင်း၊ ကဒ်ပြားတိုးချဲ့ခြင်းပုံစံကိုပြောင်းလဲခြင်း။ ပြီးတော့ဖုန်းရဲ့ trackball ကိုပဲသုံးပါ။
အ recoverys ၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည် HTC Magic သို့မဟုတ် HTC Dream or G1။ ဥပမာအားဖြင့် HTC Magic 32B plate ဖြင့်ဤပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်အလွန်ပြီးပြည့်စုံပြီးရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာများကိုသင်ပထမပုံတွင်တွေ့ရသောသူများဖြစ်သည်။ အတွက် HTC Dream or G1 အများဆုံးအသုံးပြုသော၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖြစ်ပါတယ် Cyanogen အရာဗားရှင်း 1.4 အပေါ်လက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ပထမ ဦး ဆုံးသင်ဖိုင်ကို download လုပ်ပါ နာလန်ထူ သိသာထင်ရှားပါတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုချုံ့ထားလျှင်၎င်းကို unzip လုပ်ပြီး၎င်း၏ tools folder ထဲသို့ထည့်ပါ Android SDK။ ဤဖိုင်များတွင် .img တိုးချဲ့မှုရှိသည်။
သင်ဖုန်းကိုပိတ်ပြီးဖွင့်လိုက်သည် fastboot mode, (အတွက် မျှော နောက်ကျော key ကို + ပါဝါနှင့် g1 ပါဝါသော့ + ကင်မရာခလုတ်)
console ကိုဖွင့်ပြီး Android SDK ၏ tools folder မှအောက်ပါတို့ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
fastboot boot filename.img (၎င်းသည်ဖိုင်အမည်ကိုထည့်ပြီး၎င်းမှကူးယူထားသောဖိုင်အမည်ကိုတစ်ခုစီရေးသည်)
ဤအရာနှင့်အတူဖုန်းသည် restart လုပ်ပြီးပုံနှင့်အတူပုံရိပ် နာလန်ထူ လည်ပတ်မှုနှင့်၎င်းတွင်ရှိသည့်ရွေးချယ်စရာများသည်၎င်းကိုအလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်းအမြဲတမ်းတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါ။ ဖုန်းကိုပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပါ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး mode ကို ကျနော်တို့အရင်တပြန်သွားပြီမြင်လိမ့်မည် နာလန်ထူ ငါတို့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဖုန်းနှင့်ကဒ်ကိုတပ်ဆင်ပြီးပါကပြန်လည်ဆယ်တင်ခြင်းဖိုင်ကိုသင်၏ SD ကဒ်ထဲသို့ကူးယူပြီး၎င်းကိုအမည်ပြောင်းပါ recovery.img.
Android sdk ၏ console နှင့် tools folder မှသင်ရိုက်ထည့်ပါ
adb shell ကို flash_image ပြန်လည်နာလန်ထူ /sdcard/recovery.img
ငါက install လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပါ
adb shell ကို reboot
Terminal သည်ပြန်လည်စတင်ပြီးဖုန်းရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူမျက်နှာပြင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ငါတို့ဝင်တိုင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေး mode ကို ဒီမျက်နှာပြင်ဟာရရှိနိုင်တဲ့ရွေးချယ်မှုအားလုံးနဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » လဲ tutorial » အန်းဒရွိုက် Recovery ကို » Android ဖုန်းပေါ်တွင် RECOVERY အသစ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ခြင်း
ငါ့မှာအိပ်မက်တစ်ခုရှိတယ်။ ငါပုံရိပ်ပြန်ကောင်းလာအောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ပြီးတော့ rom ကိုပြောင်းလဲဖို့အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်တယ်။ သင်က terminal ကိုကိုယ်တိုင်မှတဆင့်အော်ပရာဖြင့်၎င်းကို SD ထဲသို့ကူးယူပြီးရင်သင်ပြန်လည်ရယူရန်နှင့်ထို မှနေ၍ အစွန်းသို့မွမ်းမံရန်စတင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာပြုပြင်ထားသောပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းများဖြင့်သင်၏ Androids သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင် terminal များဖြစ်လာသည်။
ငါ ./adb လုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါသူကငါ့ကိုပြောတယ်။
အမှားစက်ကိုမတွေ့ပါ။ ငါပြန်လည်ဆယ်တင်လို့မရဘူး ...
ချစ်ခင်ရပါသော၊ ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပြင်ဆင်ပြီးပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် FASBOOT MODE ဖုန်းကိုစတင်သည့်အခါတွင်ကျွန်ုပ်သည်သတိမထားမိခဲ့ပါက jojojo သို့သော်အဆုံး၌၎င်းသည်သမိုင်းပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ recovery cyanogem ဖြင့်အရန်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်အခြား rom တစ်ခုကိုစမ်းသပ်။ ကျွန်ုပ်မနှစ်သက်ခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အရန်ကူးခြင်းမှပြန်ယူခဲ့သည်သို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ htc သင်္ကေတပြီးနောက်ချိတ်ထားသည် ဒါပေမယ့်အမည်းရောင်ကဘယ်တော့မှအဆင်မပြေဘူး။ ဒါကြောင့်ငါအပြည့်အဝ ROM ကိုပြန် install လုပ်ပြီးအကျိုးကျေးဇူးတွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ။
ငါအဲဒီကနေ ext3 (သို့) ext2 ကို format လုပ်လို့ရလား။ ငါ ext2 ကနေ etx3 ကိုပြောင်းလိုက်ရင် fat32 ကိုထိခိုက်နေပြီလား။
PS JACxHeroSki ၁.၈ သည်အရည်နှင့်သူရဲကောင်းဂရပ်ဖစ်များကိုသင်လိုချင်ပါကသင်၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ Alvaro ။ အကယ်၍ သင်သည် Ext2 မှ ext3 သို့ extension ကို format လုပ်သည်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲပါက Fat32 အခန်းကန့်သည်လုံးဝသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ သင့်မှာ ၁.၈ ရှိလား။ မင်းရဲ့ terminal, the magic or g1.8 ကဘာလဲ။
ငါ့မှာ jacheroski1 ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်တဲ့ g1.8 ရှိတယ်။ ၁.၆ အရမ်းကောင်းနေတယ်။ ပြခန်းတွေ၊ windows တွေအများကြီးပါတဲ့ browser လိုကြီးမားတဲ့ application ကနေပြန်လာတဲ့အခါ home screen ကို "restart" လုပ်တယ်။ ။
ဖိုရမ်၌ xda developer များမှ၎င်းတို့သည် "compcache" နှင့် "swapiness" နှင့်အခြားအရာများအကြောင်းပြောဆိုသည်ကိုသတိပြုမိပါက၎င်းတို့သည် ၆၄ MB swap swap လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သံသယရှိခဲ့ပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည်နားလည်မှုလွဲခဲ့ပါလား။ အချိန်ရှိသည့်အခါသင်ပြန်လည်စစ်ဆေး။ ရှင်းပြနိုင်မလား။ « Akirah »၏ခေါင်းစဉ်များနှင့်« JACHEROSkiv »၏တီထွင်သူများမှကျေးဇူးတင်ပါသည်
အိုးနှင့် BFS ကဘာလဲ? အကောင်းဆုံး system frameworks? = P
PS: file system ကို format ချခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းကိုခွင့်ပြုသည့် recovery သည် Cyonogen ကခွင့်မပြုသည့်ပုံတွင်ရှိသော AmonRa ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် Linux ကိုမစီမံနိုင်သော်လည်း recovery cone မှကိုယ်တိုင်ပုံစံချနိုင်သည်။ cyanogen မှအမှု၌), နှင့်ပညတ်တော်တို့ကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ? သူတို့ကိုငါရှာမတွေ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ ___ အားလုံးငါ့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုအားလုံးကိုဖြေကြားဖို့အချိန်ယူမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
ငါကြားပြီးအရာတစ်ခုစီ၏လက်စွဲ၊ compache, swapp, bsf ကိုစတင်သည်။ ဖုန်းကိုသူ့ဟာသူဘယ်လို format လုပ်မလဲနောက်တစ်ခုနှင့် linux command များပေါ်တွင်အခြား (ဒီတစ်ခုကလုပ်နေပြီဖြစ်သည်) ။ အလုပ်တွေအများကြီးဟမ်? :)
ဟုတ်တယ်၊ g1 ရှိတယ်၊ ၁.၇ ဗားရှင်းကိုငါ install လုပ်တယ်၊ ၁.၈ ကိုပဲကူးလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကောင်းပြီ၊ သင်မူလ ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့၊ သင်ပြတင်းပေါက်အမြောက်အများပါတဲ့ browser လိုအရင်းအမြစ်တွေလိုချင်တဲ့ application ကနေလာရင်ဒါမှမဟုတ် ပြခန်း, ဆွေမျိုးဖြစ်ပါတယ်
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည် ၁.၈ ထည့်သွင်းထားသော်လည်းသင်ကျွန်ုပ်ကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုသံသယရှိနေသည်။
ကျွန်ုပ်ရရှိသော recovery သည် Cyanogem မှ G1 အများစုကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကို ext2 ext3 အခန်းကန့်ကိုတိုက်ရိုက် format လုပ်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းပြန်လည်နာလန်ထမှုကိုသက်ဆိုင်ရာ command များနှင့်တွဲဖက်ပေးသော console မှကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်မလားဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်စဉ်းစားခဲ့သည်။ သူတို့ကိုရှာပြီး (linux တွေ) ငါရှာမတွေ့ဘူး။ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား?
နောက်ထပ်အားနည်းချက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည် Jacheroski ၁.၇ ရှိသည့် Rom အားပြန်လည်ရယူခြင်းဖြင့်အရန်တစ်ခုပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သော်လည်းအခြားသူများကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားရှာဖွေသောကြောင့်ပြန်လည်ရယူလိုခြင်း (ဤအမျိုးအစားမှာအရသာရှိသောကြောင့်) ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ HTC ၏အမှတ်တံဆိပ်နာရီထောင်ပေါင်းများစွာဖွင့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်တိုးတက်မှုမှမလုပ်နိုင်ပါ။ အမှားအယွင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ လမ်းညွှန်မှုလိုအပ်သည်။ Rom ကိုပြောင်းပါ .. ကဒ်ပြားကိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖယ်ရှား။ format လုပ်ပါ။ ပျော်ရွှင်သောပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်
အစမှာပုံထဲမှာတွေ့ရတဲ့ ammonRa နဲ့ငါစမ်းနိုင်သလား။
နောက်တစ်ခုကတော့ XDA developer forum မှာ၊ Akirah ရဲ့ post မှာပေါ်လာတာပါ။http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=555624) (JacHeroSkiXXX rom အားပြုပြင်ခြင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်သည်။ )
ဒါဘာလဲ?? ပိုကြီးတဲ့လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ် partition ကို ?? ကျွန်တော့်ကိုဘာသာပြန်လို့ရမလား။ ကျွန်တော်ကအရမ်းကြီးနေလို့ပါ။ ကဒ်ရဲ့အခန်းကန့်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုပါသလား။
နှင့်အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည် "Kernel w / BFS" .. ဒါကို jacHeroSki developer တွေရဲ့ post မှာထုတ်ဝေထားလို့ပါ။http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=534479),
BFS = အကောင်းဆုံးမူဘောင်စနစ် ?? ကျွန်တော်မသိပါ..
ကျွန်ုပ်သည် Mac switcher (လေ့လာသူ) ဖြစ်၍ console တွင်အသုံးပြုရန်မည်သည့် command များကိုအသုံးပြုရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ
ငါ Mac ပေါ်မှာလုပ်ဖို့ k ကိုနားလည်တယ်၊ မင်းထည့်ရမယ် ။/adb,no?
သတင်းကောင်း။ JackHeroSkiv 2.1 သည်ထူးခြားသည်။ !!!! ဆံပင်၊ အရည်၊ ဖော်ရွေမှုနှင့်လျင်မြန်သည်။
သင် LinuxSwap အခန်းကန့်ကို 64MB သို့ချဲ့ထွင်ရန်လိုသည်။
ရွှေစည်းကမ်းချက်ကိုမှတ်ထားပါ။ မူလစာမျက်နှာတွင်သော့ကိုဖွင့ ်၍ မရ၊ သို့မဟုတ်ဖွင့်ထားသောကီးဘုတ်ဖြင့်အိမ်သို့သွားပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိရသည့်တစ်ခုတည်းသောအမှား ....
user.conf ဖိုင်ရှိထို swapiness ပြandနာနှင့်အခြားချိန်ညှိချက်များနှင့်အတူစနစ်နှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်ဖတ်နေဆဲဖြစ်သည်
သင်စမ်းသပ်မှုတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်နှုန်းကသင့်ကိုအံ့အားသင့်စေမယ့် rom တစ်လုံးကိုအကြံပေးချင်တာပါ။ XDA-Developers အတွက် HEro Revolutions .. ဒါကဘယ်လောက်မြန်မြန်မြန်သလဲဆိုတာငါ့ကိုမယုံရင် =)
AH Anto … ebay တွင် rooting နှင့်ကွဲလွဲနေသောကျွန်ုပ်၏ HTC အတွက်အပိုပစ္စည်းများတွေ့ရှိခဲ့သည်
မင်းကိုတွေ့တော့ .. =)
ဟယ်လို။ သင်တွေ့ပြီဝမ်းသာပါတယ် ငါမှတ်ချက်ပေးသောထိုရမ်ကိုငါကြိုးစားကြည့်မည်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ
ငါသံသယရှိတယ်။ ဤအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ဖုန်းကို BACK + POWER ခလုတ်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်စဖွင့်သောအခါ၊ charger အသစ်ပေါ်လာသလားသို့မဟုတ်စကိတ်စီးနေစဉ် androids charger သည်ဆက်လက်တည်ရှိသလား။
Tory နေသာ ဟုသူကပြောသည်
သင်ခန်းစာထဲမှာပြောသမျှအတိုင်းငါလုပ်ပါတယ်။ ခြေလှမ်းအားလုံးကိုကျွန်တော်လိုက်တယ်။ "adb shell reboot" ကိုထည့်လိုက်တိုင်းရပ်လိုက်တယ်။ ဖုန်းကို reset မလုပ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် recovery recovery လုံးဝမပြီးသေးဘူး။
Tory Sunny အားပြန်ပြောပါ
ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်ပုံမှန်အားဖြင့်ပြုသကဲ့သို့မိုဘိုင်းကိုပိတ်ထားရန်, သင်ထင်, ဒါပေမယ့်ငါကပြီးသားပြီနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး install လုပ်မထားပါ
adb shell reboot အစား adb reboot ကိုစမ်းကြည့်ပါ
ငါ့မှာ thc g1 ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် android presentation screen ကအဆုံးသတ်သွားရင် screen ကအမည်းရောင်ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ၊ ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
* ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဖုန်းနှင့်ကဒ်တပ်ထားပါက recovery ဖိုင်ကိုသင်၏ sd card ထဲသို့ကူးယူပြီး recovery.img ဟုအမည်ပြောင်းပါ။
* Android sdk ၏ console နှင့် tools folder မှသင်ရိုက်ထည့်ပါ
ဤလုပ်ဆောင်မှုများကို fastboot mode ဖြင့် pc နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဖုန်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ... အကယ်၍ sd ကိုတပ်ဆင်ပြီး console မှဖိုင်များကိုကူးယူပါက
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Windows7 ကငါ့ဖုန်းကိုမသိဘူး။ ဒီ system အတွက် driver တွေကိုဘယ်မှာရနိုင်မလဲ။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းသည် HTC Dream, DREA100 PVT 32B; HBOOT-0.95.0000; CPLD-4; ရေဒီယို _2.22.19.26I
Mauricio Herrera ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်မှာပြaနာရှိနေတယ်။ windows7မှာ android driver ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် fastboot mode မှာဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာအကြား USB ဆက်သွယ်မှုမရှိဘူးဆိုတာနဲ့သူကဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကြားဆက်သွယ်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ ငါဘက်ထရီကိုထုတ်ပြီးဖုန်းကဆက်အလုပ်လုပ်နေလို့ပါ။
ဖုန်းကိုပိတ်ပြီး fastboot mode ဖြင့်ဖွင့်ပါ (ပဉ္စလက်အနေဖြင့် back key + power နှင့် g1 power key + ကင်မရာခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်)
console ကိုဖွင့်ပြီး Android SDK ၏ tools folder မှအောက်ပါကိုရိုက်ပါ။
ဒါနဲ့ console (CMD) ကိုဖွင့်ပြီး D: \_ android-sdk-windows \_ tools>> သွားပြီးရေးလိုက်ပါ
fastboot Boot တက်စင်တီမီတာ - ပြန်လည်နာလန်ထူ - 1.4.img
Mauricio Herrera ကိုပြန်ပြောပါ
device ကိုစောင့်နေခြင်း။ ဆိုလိုတာက XD device ကို sdk စောင့်နေခြင်းကိုဆိုလိုတာကသင်ဟာအရာအားလုံးကိုမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ သင် fastbboot mode ကိုစတင်သည်နှင့်အမြန်နှုန်း bootboot mode ကိုစကရင်ပေါ်ရှိစောင့်ဆိုင်းနေသောကိရိယာနှင့်စတင်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းသည် fastbooto မည်သို့စတင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်မိုဘိုင်းဖုန်းတိုင်းသည်၎င်းကိုကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်ကိုသတိရပါ
console ဖိုင်ရဲ့နာမည်ကဘာလဲ… ???
ကိုယ့် gg620 အကြိုညရှိပါက? အဘယ်နိမ့်ကျသောပြန်လည်နာလန်ထူ?
mac မှာ terminal ကတူညီတဲ့အရာတွေကိုလက်မခံတဲ့အပြင် SDK ဖိုဒါဘယ်လိုရောက်ရမယ်ဆိုတာတောင်မသိဘူး၊
ငါ htc ကိုကြိုးစားရန်ငြီးငွေ့လာသည်။ ၎င်းသည်စက်ကိုစောင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ ငါ sdk ၏တည်းဖြတ်မူ ၄ ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိဗားရှင်းကို install လုပ်ပါကအမှားတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးသူတို့ကသင်ခန်းစာတစ်ခုတင်လိုက်ရင်ပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါ
ငါ့မှာ gtablet viewico sonico 2.2 ရှိတယ်။ ငါ manager manager ကိုထည့်ပြီး recovery mode ကိုရွေးလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ install လုပ်လိုက်တဲ့ clockwormod က load မထွက်ပါဘူး loading and recovery ကဘယ်တော့မှမ ၀ င်ဘူး၊ အခုငါ tablet ကိုဖွင့်လိုက်တိုင်းတိုင်း Recovery mode ကိုရှာပြီး T_T ကိုဘာမှမလုပ်နိူင်ပါ
Josmell Jimenez ဟုသူကပြောသည်
Hellooooo, ငါအရမ်းလေးနက်တဲ့ပြPROနာတစ်ခုရှိသည်နှင့်ငါ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနည်းလမ်းများအားငါပြုပြင်လို့မရပါဘူး။ အရာရာတိုင်းကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ငါကြိုးစားခဲ့သည်။
ငါ recovery အသစ်တစ်ခုကို install လုပ်ဖို့အဆင့်တွေကိုလုပ်တဲ့အခါသူက VODAFONE မျက်နှာပြင်မှာပဲရှိနေပြီးအဲ့ဒီကနေမအောင်မြင်ပါဘူး။ ငါကြိုးစားမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပေမယ့်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။
ငါ့မှာ 32B ရှိတယ်
Josmell Jimenez အားစာပြန်ပါ
ငါ bq kepler တက်ဘလက်မှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုစတင်လုပ်နေပေမယ့်မတုံ့ပြန်ပါဘူး၊ ငါဘယ်လိုပြန်စရမလဲ။